Dagaalo ka dhacay deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose
Saturday August 10, 2019 - 14:38:28 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa dagaalo ay ka dhaceen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, kaas oo u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo Ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM oo ku sugan deegaano ka tirsan gobolkaas.
Dagaalka 1aad ayaa waxaa uu ka dhacay duleedka degmada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha Hoose, kadib markii Al-Shabaab ay weerareen Saldhiga ay halkaasi ku leeyihiin Ciidamada AMISOM,waxaana dada ku sugan Baraawe ays heegeen in dagaal uu halkaasi ka dhacay.
Weli lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaas kana soo gaaray labada dhinac,hayeeshee xaaladu ay maanta tahay mid degan sidoo kalena Ciidamada AMISOM ay ku sugan yihiin Saldhigyadooda.
Dhinaca kale dagaal culus ayaa waxaa uu ka dhacay deegaanka Shalaanbood ee Gobolka Shabeellaha Hoose,kadib markii xalay Saqdii Dhexe ay Al-Shabaab weerareen Saldhig ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin deegaankaas.
Dad ku sugan deegaanka Shalaanbood oo diiday in Magacooda iyo codkooda loo adeegsado Warbaahinta ayaa waxaa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa madaafiicda ay is weeydaarsanayeen Ciidamada AMISOM iyo Al-Shabaab.
Si kastaba Saraakiisha Ciidamada Dowladda iyo maamulada deegaanada ay daagaladu ka dhaceen weli kama hadlin,waxaana lagu soo waramayaa in Ciidamada AMISOM ay wadaan dhaq dhaqaaqyo Ciidan, iyada oo ay xusid mudan tahay in Ciidamada Dowladda ay saacadihii la soo dhaafay dhankooda dhaq dhaqaaqyo ka wadeen deegaano ka tirsan Gobolkaasi Shabeellaha Hoose.